ကိုယျအလေးခြိနျကသြှားတဲ့အခါ သငျ့အရပွေားက ဘာဖွဈလာသလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ကိုယျအလေးခြိနျကသြှားတဲ့အခါ သငျ့အရပွေားက ဘာဖွဈလာသလဲ?
ကိုယျအလေးခြိနျကသြှားတဲ့အခါ သငျ့အရပွေားက ဘာဖွဈလာသလဲ?
ကိုယျအလေးခြိနျ သိသိသာသာ ကသြှားတာက ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှုတဈခုဖွဈသလို ခကျခဲတဲ့ အလုပျတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ရလဒျက ပြျောစရာကောငျးပမေယျ့ ကိုယျအလေးခြိနျကသြှားပွီဆိုရငျ အရပွေားက တငျးတငျးရငျးရငျးမရှိတော့ပဲ ပြော့တှဲပွီးကနျြခဲ့တာက ပွဿနာတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဒီအရပွေားလြော့ရဲတဲ့ပွဿနာကို မကုသခငျမှာ ကိုယျအလေးခြိနျကနြစေဉျအတှငျး သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှဖွေဈပကျြသလဲဆိုတာ သိသငျ့ပါတယျ။
ဒီအသကျအရှယျမှာ ခန်ဓာကိုယျက နာရီတဈလုံးကဲ့သို့ အလုပျလုပျတာကွောငျ့ နညျးနညျး relax လုပျနိုငျပါတယျ။ လူအမြားစုမှာ မွနျဆနျတဲ့ ကိုယျတှငျးဇီဝကမ်မဖွဈစဉျ နှငျ့ ကျောလာဂငျြကောငျး ထုတျလုပျမှု ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သနျ့စငျတဲ့ ရမြေားမြားသောကျပွီး မကျြနှာသဈဆေး အပြော့စား သုံးပေးခွငျးနှငျ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့ပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြား ပိုစားပေးယုံနှငျ့ လုံလောကျပါတယျ။
ဒီအသကျအရှယျကာလအတှငျးမှာ မြားစှာသော processeတှေ နှေးကှေးသှားပါတယျ။ နဂိုပုံပနျးသဏ်ဍာနျ ပွနျရဖို့အတှကျ အစားအသောကျ ပွောငျးလဲရနျနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျရေးအတှကျ တတျကွှစှာ နထေိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓါတျတှပေါဝငျတဲ့ အာဟာရဖွညျ့စှကျစာတဈမြိုးကို ရှေးခယျြဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ဒီအသကျအရှယျမှာ သငျဟာ ဆံပငျပုံစံကအစ အရာရာတိုငျးကို ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲပဈခငျြနိုငျပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ သငျ့အသားအရဟော ၎င်းငျးရဲ့ ဆနျ့နိုငျကြုံ့နိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှေ တဖွညျးဖွညျး ဆုံးရှုံးလာပွီး ပွငျပ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ လှမျးမိုးမှုတှေ ပိုမိုဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။ အာဟာရပွညျ့ပွီး မရှိမဖွဈ ဗီတာမငျ သတ်တုဓါတျတှကွှေယျဝတဲ့ diet တဈခုကို ရှေးခယျြတာက အရပွေားပငျပနျးနှမျးနယျတာကို ရှောငျကွဉျဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ မကျြနှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးခွငျး နှငျ့ ကျောလာဂငျြပါဝငျတဲ့ အလှကုနျတှကေို သုံးပေးခွငျးတို့ကို ပွုလုပျပေးပါ။
ခန်ဓာကိုယျလုပျငနျးစဉျအားလုံးက ပိုမိုနှေးကှေးလာသျောလညျး ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ကစြလေိမျ့မယျ့ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကို အရှိနျမွှငျ့ဖို့ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါသေးတယျ။ diet လုပျယုံသာမကဘဲ လကေောငျးလသေနျ့ရတဲ့နရောမှာ လမျးလြှောကျခွငျး၊ ယောဂကငျြ့ခွငျး၊ ရကေူးခွငျး စတဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကိုလညျး ဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါက ကယျလိုရီ ရယူခွငျးနှငျ့ သုံးစှဲခွငျးအကွားမြှတမှုကို ထိနျးသိမျးဖို့ မရှိမဖွဈလညျး ဖွဈပါတယျ။ ရအေလုံအလောကျသောကျခွငျး၊ skin care products တှကေို သုံးခွငျးပွုလုပျပေးပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျ ခနြစေဉျ အသားအရအေတှကျ ဘယျလိုဂရုစိုကျမလဲ
အထူးသဖွငျ့ diet လုပျတဲ့အခါ အရပွေားဟာ ဘယျအသကျအရှယျမှာဖွဈဖွဈ အစိုဓါတျရရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။ special products တှကေို သုံးဖို့နဲ့ အရညျရှမျးတဲ့ သဈသီးတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို အလုံအလောကျစားဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
သငျ့အသားအရရေဲ့ ဆဲလျသတှေကေို သနျ့စငျဖို့ သတိရပါ။ အိမျမှာပဲ scrub လုပျနိုငျသလို အလှပွငျဆိုငျသှားပွီးလညျး လုပျနိုငျပါတယျ။
တခါတရံ ကိုယျအလေးခြိနျကသြှား ပွီးနောကျမှာ အသားအရကေ သူ့ဘာသာသူ ကြုံမသှားနိုငျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အသားအရလြေော့ရဲတဲ့နရောတှေ၊ တှနျ့တဲ့နရောတှကေို သခြောသနျ့စငျပေးဖို့ ဂရုစိုကျပေးဖို့လိုပါတယျ။ နရေောငျကာလိမျးဆေး အသုံးပွုဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတဲ့အခါ သင့်အရေပြားက ဘာဖြစ်လာသလဲ?
ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာ ကျသွားတာက ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သလို ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်က ပျော်စရာကောင်းပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားပြီဆိုရင် အရေပြားက တင်းတင်းရင်းရင်းမရှိတော့ပဲ ပျော့တွဲပြီးကျန်ခဲ့တာက ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအရေပြားလျော့ရဲတဲ့ပြဿနာကို မကုသခင်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေစဉ်အတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်သလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က နာရီတစ်လုံးကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်တာကြောင့် နည်းနည်း relax လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုမှာ မြန်ဆန်တဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် နှင့် ကော်လာဂျင်ကောင်း ထုတ်လုပ်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သန့်စင်တဲ့ ရေများများသောက်ပြီး မျက်နှာသစ်ဆေး အပျော့စား သုံးပေးခြင်းနှင့် အင်တီအောက်ဆီဒင့်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများ ပိုစားပေးယုံနှင့် လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်ကာလအတွင်းမှာ များစွာသော processeတွေ နှေးကွေးသွားပါတယ်။ နဂိုပုံပန်းသဏ္ဍာန် ပြန်ရဖို့အတွက် အစားအသောက် ပြောင်းလဲရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် တတ်ကြွစွာ နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်တွေပါဝင်တဲ့ အာဟာရဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုးကို ရွေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်မှာ သင်ဟာ ဆံပင်ပုံစံကအစ အရာရာတိုင်းကို ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲပစ်ချင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သင့်အသားအရေဟာ ၎င်းရဲ့ ဆန့်နိုင်ကျုံ့နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးလာပြီး ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ပြီး မရှိမဖြစ် ဗီတာမင် သတ္တုဓါတ်တွေကြွယ်ဝတဲ့ diet တစ်ခုကို ရွေးချယ်တာက အရေပြားပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်း နှင့် ကော်လာဂျင်ပါဝင်တဲ့ အလှကုန်တွေကို သုံးပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးက ပိုမိုနှေးကွေးလာသော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေလိမ့်မယ့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။ diet လုပ်ယုံသာမကဘဲ လေကောင်းလေသန့်ရတဲ့နေရာမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း စတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက ကယ်လိုရီ ရယူခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းအကြားမျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မရှိမဖြစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေအလုံအလောက်သောက်ခြင်း၊ skin care products တွေကို သုံးခြင်းပြုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် ချနေစဉ် အသားအရေအတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ
အထူးသဖြင့် diet လုပ်တဲ့အခါ အရေပြားဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အစိုဓါတ်ရရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ special products တွေကို သုံးဖို့နဲ့ အရည်ရွမ်းတဲ့ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အလုံအလောက်စားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
သင့်အသားအရေရဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို သန့်စင်ဖို့ သတိရပါ။ အိမ်မှာပဲ scrub လုပ်နိုင်သလို အလှပြင်ဆိုင်သွားပြီးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တခါတရံ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွား ပြီးနောက်မှာ အသားအရေက သူ့ဘာသာသူ ကျုံမသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အသားအရေလျော့ရဲတဲ့နေရာတွေ၊ တွန့်တဲ့နေရာတွေကို သေချာသန့်စင်ပေးဖို့ ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ နေရောင်ကာလိမ်းဆေး အသုံးပြုဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Previous articleသငျ့ရဲ့ relationship ကိုပိုမိုတညျငွိမျစဖေို့အတှကျ အလှယျကူဆုံးအရာလေးမြား
Next articleလူတှလေို အလုပျကိုယျစီ လုပျကိုငျနရေတဲ့ ထူးထူးခွားခွားခှေးလိမ်မာလေးမြား